Anyị nwalere Alcatel GO Play, ngwaọrụ na-eguzogide ọgwụ | Gam akporosis
Na mbipụta a nke IFA na Berlin onye nrụpụta France Alcatel ekpebiela ịkụ nzọ na ndị na-ege ntị: ndị na-eme egwuregwu egwuregwu ma chọọ ngwaọrụ ndị na-eguzogide ọgwụ ma na-arụ ọrụ.
Anyị ahụworị ya Go Watch na-adọrọ mmasị, ngwaọrụ nke na-apụ maka iguzogide ájá na mmiri yana ịdị mfe ya. Ugbu a bụ oge nke Alcatel OneTouch GO Play, ngwaọrụ e mere maka nke kachasị dị egwu.
1 Alcatel OneTouch GO Play, ekwentị na-eguzogide ọgwụ na ájá na mmiri
2 Njirimara teknụzụ nke Alcatel OneTouch GO Play
Alcatel OneTouch GO Play, ekwentị na-eguzogide ọgwụ na ájá na mmiri
Alcatel ejirila Alcatel OneTouch GO Play ju anyị anya. Anyị enweela ohere ịnwale ya na mmetụta ahụ dị ezigbo mma. O doro anya na njedebe ya abụghị nke kachasị elu, abụghị ihe ị na-achọ na ekwentị ụdị a.
Ihe dị ịrịba ama n'ezie bụ na Alcatel OneTouch GO Play bụ smartphone na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọgwụ. ka ịmalite ya rubberized mkpuchi ga-egbochi ekwentị site na-agbajikwa site na mberede ọdịda.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na Alcatel nyere Alcatel OneTouch GO Play na aAsambodo IP67 nke ahụ na-ekwe nkwa na ekwentị ọhụrụ gị ga-ewe nkeji iri atọ n'ime mmiri dị na 30 mita, na mgbakwunye na iguzogide uzuzu, ebe ọ bụ na anyị nwere ekwentị nke ga-anagide ụzọ nke onye njem ọ bụla na-enweghị ntutu isi ya.
Njirimara teknụzụ nke Alcatel OneTouch GO Play
Ihe owuwu mmetụta na-eguzogide ọgwụ polycarbonate
Ihuenyo 5 sentimita asatọ na 1280 x 720 mkpebi na 294 dpi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 410
Nchekwa n'ime 8 GB
Oghere kaadị Micro SD Ee ihe ruru 32GB
Igwefoto na-aga n'ihu 8 megapixels
Atụmatụ ndị ọzọ IP67 asambodo // Ujo na-eguzogide ọgwụ
Mmetụta mbụ anyị nwere dị mma mgbe anyị tụlere ahịa maka ekwentị Alcatel a. Ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Alcatel OneTouch GO Play ga-efu ihe na-erughị euro 250Ọ bụ nhọrọ iji tụlee ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị siri ike ma na-adịgide adịgide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » Alcatel OneTouch GO Play, nyocha vidiyo nke ekwentị ọhụrụ Alcatel
Lee ka atụmatụ ọhụrụ si dị mma si ALCATEL ONETOUCH! Karịsịa ihe na-emenye ụjọ na-aga akara (smartwatch + smartphone). Echere m na na nke a ụdị akara ahụ abanyela na ụwa nke egwuregwu, na -emepụta ngwaọrụ ndị mmadụ niile nwere egwuregwu egwuregwu. Onye mmeri ọzọ nke ọdịda ga-abụ ụzọ e guzobere site na nche na ekwentị nke otu akara ahụ. Na mgbakwunye, a na-ekwu, ALCATEL ONETOUCH ga-enye onyinye maka otu ọnụahịa ahụ, na-ahapụ teknụzụ a na-enweghị ike ịbanye n'ime mmadụ niile.
Zaghachi Jacobo Tatay